Ruqiyo Shiikh Naaji “Waxaan musharax u ahay kursiga baarlamaanka ee boqortooyada Silcis Gorgaarte” | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ruqiyo Shiikh Naaji “Waxaan musharax u ahay kursiga baarlamaanka ee boqortooyada Silcis...
Ruqiyo Shiikh Naaji “Waxaan musharax u ahay kursiga baarlamaanka ee boqortooyada Silcis Gorgaarte”
Drs. Ruqiyo Shiikh Naaji, oo ah gabar aqoonyahanad ah, muddo dheerna ka soo shaqaynaysay howlaha samafalka, ayaa sheegtay in ay tahay musharax u tartami doona kursiga beesha boqortooyadda Silcis Gorgaarte ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaanna waraysi dheer oo ay maanta siisay mid ka mid ah idaacadaha maxaliga ah ee Muqdisho, ku faahfaahisay qorsheeda siyaasadeed haddii ay ku guulaysato xilkaasi.
Ditooreesa Ruqiyo, waxay cambaaraysay tacadiyada kufsiga iyo dilalka ah ee muddooyinkii u dambeeyey qaybo ka mid ah dalka loogu gaystay gabdho Soomaali ah, waxayna ka dalbatay hay’adaha garsoorka dowladda Soomaaliya inay cadaaladda marsiiyaan shaqsiyaadka xadgudubka u gaysanaya haweenka, ayna soo saaraan shuruuc xakamaneysay tacadiyada ka dhanka ah haweenka.
Ruqiyo, waxaa kale oo ay u soo jeedisay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya inuu ansixyo sharci xakamaynaya inaan lagu xadgudbi karin kootada haweenka ee Baarlamaanka.
Ruqiyo waxay ku ammaantay Dowladda Madaxwayne MC Farmaajo tillaabooyinka waxtarka u leh dowladnimada ee ay ku tillaabsatay muddadii ay hogaanka dalka hayeen, waxayna soo jeedisay in Dowladdu ay dhinaceeda ka dhaqangeliso heshiiskii ay Muqdisho ku gaareen Dowladda dhexe iyo madax goboleedyada.
“Dalku wuxuu u baahan yahay samatabixin, inkastoo halka uu maanta joogo markii loo fiiriyo marxaladihii la soo maray la dhihi karo waa meel laga sii ambaqaadi karo, haddana waxaa lagama maarmaan ah in shaqooyinka loogu qidmaynayo bulshada in loo dhiibo dad lagala xisaabtami karo, oo oggol in ay hayaan ammaano” Ayeey tiri Ruqiyo waxay intaasi raacisay in waqti badan ay galisay sidii Qaranka Soomaaliya uu mar kale cagahiisa isugu taagi lahaa.
Previous articleAgaasime ku-xigeenka laanta socdaalka oo saraakiil u furay tababart ku aadan Hubinta Dukumeentiyada lagu Safro
Next articleCiidamada Danab oo Saraakiil Alshabaab ah dilay
Madaxweyne Farmaajo oo wali ku dhagan magacaabida Ra iisal wasaaraha